VaTsvangirai Voti Mhirizhonga Yezvematongerwo eNyika Inogona Kukanganisa Sarudzo
Mbudzi 07, 2011
Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai vanoti mhirizhonga inogona kukanganisa sarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya
Mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri werimwe bato reMDC, VaMorgan Tsvangirai, vati sarudzo dzakatarisirwa kuitwa munyika gore rinouya dzichave dzinoshoresa kana mhirizhonga iri kuitika munyika ikaramba ichienderera mberi.
VaTsvangirai vataura mashoko aya pamusangano wavait nevatori venhau kumba kwavo kuStrathaven muHarare mushure memusangano wavaita nemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.
Mashoko aVaTsvangirai aya anotevera mhirizhonga yakaitika mumusha weChitungwiza neSvondo pamwe nekune dzimwe nzvimbo munyika musvondo rapfuura.
VaTsvangirai vati gurukota rezvevechidiki uy vari nhengo yeZanu PF, VaSaviour Kasukuwere pamwe nemumwe kanzura weZanu PF kuChitungwiza VaTichaona Chapfika ndivo vakakonzeresa mhirizhonga yekuChitungwiza iyi. Studio 7 haina kukwanisa
Kutaura naVaKasukuwere pamwe naVaChapfika kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
VaTsvangirai vati vawirirana naVaMugabe kuti makomiti emapato ose ari muhurumende yemubatanidzwa achasangana nechishanu svondo rino kuti vazeye nyaya yemhirizhonga iri kuitika munyika.
VaTsvangirai vati pavaita musangano naVaMugabe, mukuru wemapurisa VaAugustine Chihuri vanga vatoita kare musangano naVaMugabe pamusoro pezvakaitika neSvondo.
Vaenderera mberi vachiti VaChihuri vanga vanyepera VaMugabe pamusoro pezvakaitika asi Havana kunyatsotaura kuti chii chaicho changa chataurwa naVaChihuri chekunyepa.
Vatiwo zvose zviri kuitwa izvi kuzvidza hofisi yavo semutungamiri wehurumende.
Zvichakadaro, bato reZANU PF rati mhirizhonga yakaitika kuChitungwiza haina kukonzerwa nebato iri asi kuti nevanhu veMDC-T avo rati vakatanga mhirizhonga vachida kuti nhumwe dzemutongi gava mugakava reZimbabwe, vaJacob Zuma dzanga dziri munyika dzione kuitira kuti dzizoti iZanu-PF yakonzeresa.
MDC-T iri kuti kune vanhu vanngangosvika makumi mashanu vakakuvara mumhirizhonga yezvematongerwe enyika yakaitika iyi, uko VaTsvangirai vaida kusangana nevatsigiri vavo.
Mutauriri weZanu PF VaRugare Gumbo vaudza Studio 7 kuti nhandareyeChibuku yainge yakapihwa kune vechidiki vebato ravo, avo vaida kutamba bhora panguva imwecheteyo veMDC-T vaidawo kuita musangano wavo munhandare imwecheteyo.
Mutauriri wechikwata chaVaZuma, muzvare Lindiwe Zulu vati zvakaitika izvi hazvifaniri kuitika zvakare.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari Director weAfrica Governance Monitoring and Advocacy Project yeOpen Society, VaOzias Tungwarara, vati SADC ino fanhirwa kutumira nhumwa dzayo nekukurumidza, kuitira kuti dzishanda neJOMIC mukuyedza kuona kuti zvakabvumiranwa muGPA zviri kutevedzerwa nemapato ose ari muhurumende.
Hurukuro naVaOzias Tungwarara